Fametahana “faux ongles” : mazia ho an’ny hoho…
Fantatrao ve fa na fohy kely tahaka ny inona aza ny hohonao dia azo atao “french manucure” sy haingoina tsara tahaka ny an’ny vehivavy rehetra foana izy ireo?
Amin’ny andro iray miavaka toy ny mariazy, ny lanonana manokana natao ho anao dia mialà amin’ny mahazatra ary haingoy mahafatifaty ny hohonao…
Raha karazan’irony fohy kely irony ny hohonao dia vahaolana akaiky ary isan’ny tsotra indrindra tena mampiavaka azy ireo amin’ny fotoana iray, ny “faux ongles”. Antony efatra rahateo no mahatsara ny fametahana “faux ongles” raha te hanao azy. Voalohany aloha dia manafina ny lesoky ny hoho izy : bory kely, mora tapaka, maty kaikitra… Ny faharoa indray dia manamafy ny hohonao ny fametahana azy, satria dia toy ireny tovana ireny izy, no sady mandrisika azy ireo haniry vetivety koa ao ambany ao. Ny antony fahatelo dia ilay tena tianao aminy, dia ny fiovan’endriky ny hohonao ho lafatra jerena, ary mahafatifaty be sy maharitra. Ny antony fahaefatra farany kosa dia ny fahaizan’ilay matihanina milalao sy maneho ny talentany.
Rehefa natoraly no fivoakan’ny tananao, nasiana “faux ongles” dia mahay tsara izay ilay nanao azy. Raha matihanina koa ny “salon” atonina amin’izany dia tsy atahorana hanova ny kalitaon’hoho ihany koa ny “faux ongles” atao. Teto izao dia ny salon de beauté Droles de Dame Anosizato Atsinanana no nikarakara ity hoho ity. Diniho tsara ny sary fa fohy kely ny hoho noraisin’izy ireo kanefa dia nahazo endrika vaovao sy miavaka izany. Ary satria hoho entina hamonjy lanonana izy ireto, dia “french manucure” no nolalaovin’ny mpanao hoho ao an-toerana nandray ity modely ity. Solohoho na “faux ongles transparents ” no nampiasaina teto, mba hampivoaka tsara an’ilay “French” ho natoraly tsara. Noravahina “perle” kely mahafinaritra izany tao aorian’izay. Afa-po ny maodely noraisin’izy ireo.
Ianao koa, afaka manatona azy ireo hikarakara ny hohonao na andavanandro na amin’ny fotoana miavaka. Isaorana ny fiarahany miasa amin’ny Jejoo. Droles de Dame Anosizato Atsinana :